Umkhiqizi kanye nomphakeli we-China single-layer evaliwe Qiangzhong
Ingavusa, ihlanganise, ihlanganise futhi ihlanganise izinto. Yenziwe ngensimbi ephezulu engenasici engu-304 no-316L. Isakhiwo nokumiswa kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zenqubo yokukhiqiza.
Le mishini ihlangabezana nezidingo ze- “GMP” yaseChina; futhi yakhelwe futhi yenziwa ngokuya ngamazinga we-JB / 4735-1997 waseChina. Le mishini ilungele imboni eyenza imithi, imboni yokudla, imboni yokuphisa, kanye nenqubo yokulungiselela uketshezi (umkhiqizo) nezinqubo ezahlukahlukene zokwelashwa kwamanzi.
I-1.Izinto zenziwe nge-316L noma i-304 insimbi engagqwali, indawo yangaphakathi ipholile, futhi uburhabaxa (Ra) bungaphansi kuka-0.4pm.
Indlela yokuxuba ifaka phakathi ukuxubana okuphezulu kwemishini nokuxuba phansi:
♦ Izinhlobo zokugwedla eziphezulu zokuzikhethela zifaka phakathi: uphephela, isikulufa, ihange, ukuklwebha noma ukugwedla, okungahlanganisa ngokuphelele izinto ngokulinganayo.
♦ Izinhlobo zokuxuba ezansi ongazikhethela zifaka phakathi: i-magnetic stirrer, i-propeller stirrer, ne-homogenizer enezansi, esetshenziselwa ukusheshisa ukuncibilika kanye ne-emulsification yezinto zokwakha.
Speed ​​Uhlobo lwejubane lokuxuba lungalungiswa isivinini noma isivinini esiguqukayo esilawulwa yisiguquli semvamisa, ukuze sigweme amagwebu amaningi ngenxa yejubane eleqile.
Cabinet Insimbi yekhabethe yokulawula ugesi engagqwali ingahlola ngokucophelela ukusebenza kwemishini, futhi ingakhombisa idatha enjengezinga lokushisa nesivinini esishukumisayo.
Ukulungiswa okungakhethwa yilezi: amathuluzi okuphefumula emoyeni, i-thermometer, imbobo yokuhlanzisisa umusi, ithegi yenhlanzeko, igeji yezinga lamanzi nohlelo lwamanzi lokulawula okuzenzakalelayo, indawo ejikelezayo yokuhlanza i-CIP ibhola, njll.
Izinhlobo zeJacket 2.Optional zifaka ishubhu ezigoqile, ibhantshi eligcwele, nebhantshi lezinyosi.
♦ Ukwahlukanisa kungaba ngoboya bedwala, igwebu le-polyurethane, noma ukotini wamaparele. Igobolondo lipholishiwe, libhulashiwe noma lihlanganiswe, ngokukhetha kwekhasimende
♦ Amandla: 30L-30000L.
Itafula elingenhla lingezinkomba kuphela, lingenza ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
'le mishini ingenza ngezifiso ngokuvumelana nempahla yekhasimende, idinga ukuhambisana nenqubo, efana nokuhlangabezana ne-viscosity ephezulu, umsebenzi ohambisanayo uqinise, izinto ezizwela ukushisa njengezidingo. Ithangi lokuxuba lakhiwa ngumzimba wethangi lokuxuba, izingqimba ezingaphezulu nezingezansi, i-agitator, izinyawo, amadivayisi wokuhambisa, amadivayisi wokufaka uphawu kushaft, njll., Kanye nokushisa noma ukupholisa amadivayisi kungangezwa lapho kudingeka.
Ngokuya ngezidingo zenqubo ezahlukahlukene, insimbi engagqwali noma insimbi yekhabhoni ingasetshenziselwa umzimba wethangi, ikhava yethangi, i-agitator kanye nophawu kushaft.
Umzimba wethangi nesembozo sethangi singaxhunywa ngokufakwa uphawu kwe-flange noma nge-welding. Izimbobo ezahlukahlukene zingavulwa emzimbeni wethangi nasesembozweni samathangi ukondla, ukukhipha, ukubuka, ukukala izinga lokushisa, ukukala kwengcindezi, ukuhlukaniswa kwesitimu, ukukhipha okuphephile, njll.
Idivayisi yokudlulisa (imoto noma isinciphisi) ifakiwe kusembozo sethangi ukushayela i-agitator ethangini lokuxuba.
Idivayisi yokufaka uphawu kushaft iyakhethwa kusuka kusibonakaliso semishini, uphawu lokupakisha nophawu lwe-labyrinth. Ngokwezidingo ezahlukahlukene, i-agitator ingaba uhlobo lwe-paddle, uhlobo lwehange, uhlobo lohlaka, uhlobo lwesikulufa, njll. Uma unezinye izidingo zokwenza ngokwezifiso, sicela uqinisekise nathi.
Sicela usebenze ngokuqinile ngokuya ngengcindezi yokusebenza kanye namazinga okushisa asebenzayo alinganiswe ku-nameplate yomkhiqizo ukugwema ingozi.
Gcina okokusebenza ngokuhambisana ngokuqinile nemithethonqubo yokupholisa nokugcoba uwoyela kumanuwali yomkhiqizo.
Ithangi lokuxuba ngokuvamile liyimishini yasemkhathini, futhi kufanele isetshenziswe ngokuya ngemithetho yokusebenza kwemishini yomoya.
Enqubeni yokukhiqiza enezidingo eziphakeme zenhlanzeko (ngokwesibonelo ezimbonini zobisi nezemithi), ukuhlanzwa nokulungiswa kwansuku zonke kufanele kusetshenziswe ngokuqinile. Uyacelwa ukuthi ubheke kumiyalo yokusebenza kwemishini ukuthola imininingwane.
Ukufaka nokulungisa iphutha kwethangi lokuxuba:
Uyacelwa ukuthi ubheke ukuthi okokusebenza kulimale kabi noma kukhubazekile ngesikhathi sokuthuthwa kwezinto, nokuthi izinto zokubopha izinto zokusebenza zikhululekile.
Uyacelwa ukuthi usebenzise amabhawodi wehange ashumeke ngaphakathi ukufaka okokusebenza ngokuvundlile esisekelweni esiqinile.
Sicela ufake imishini, amadivayisi wokulawula ugesi nezinye izinsiza kahle ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe. Sicela uhlole: 1). Ukuthi ipayipi livuliwe yini; 2). Ukuthi imitha isesimeni esihle yini; 3). Ukuthi imitha ifakwe kahle yini. Ngaphambi kokuqala ifoni, sicela uhlole idivaysi uqobo kanye nendawo ezungezile ukubona ukuthi ngabe kukhona yini izinto noma abantu okungathinta ukusebenza okuvamile kwedivayisi ukugwema ingozi.
Ngemuva kokufaka, sicela wenze ukuhlolwa kwesivivinyo imizuzwana embalwa kuqala, futhi uqiniseke ukuthi akukho sifundazwe esifushane sikagesi noma umsindo ongajwayelekile ngaphambi kokuqalisa kwesivivinyo esifushane.
Uma ithangi lokuxuba lifakwe uphawu lwemishini, inani elifanele lamafutha omshini ayi-10 noma uwoyela womshini wokuthunga kufanele lifakwe ethangini lokuthambisa lomshini ngaphambi kokuba injini enkulu iqalwe. Amanzi apholisayo kufanele adluliselwe egumbini lokupholisa lophiko olwenziwe ngomshini ukwenza insimbi yophawu lomshini igcotshwe kahle futhi ipholile. Njengoba uphawu lwemishini lungalungiswa efektri, sicela ulungise uphawu lwemishini lube sesimweni esihle ngokwencwajana yokufaka ngemuva kokuthi imishini ifakiwe, ngaphambi kokuthi isebenze ngokujwayelekile.
Ngemuva kokuthi imishini isebenza ngokujwayelekile, sicela uhlole ithempelesha ethwele, ukusebenza ngokushelela, ukuqina, njll. Nokuthi insimbi isebenza ngokujwayelekile yini. Umsebenzi wokudla ungenziwa ngemuva kokuqinisekisa ukuthi kuyinto ejwayelekile.
Ukuxuba ukukhethwa kwamathangi:
Izici ezibalulekile ezizocatshangelwa ekukhetheni ithangi lokuxuba: -Izici ezibonakalayo: izakhiwo zamakhemikhali, izimo zomzimba -Izimo zokusebenza: izinga lokusebenza, ingcindezi yokusebenza -Izimo zobuchwepheshe eziphelele: izidingo zokuxuba, izidingo zohlelo lokulawula, ukucubungula ukwakheka kombhobho, ukusebenza kwamanje izimo zeklayenti Amakhasimende anganikeza ngamapharamitha wokukhetha, singenza ngezifiso
Ukukhethwa kokushisa noma ukupholisa idivayisi
Indawo yokufudumeza amanzi ashisayo noma uwoyela, nezindlela ezimbili zokushisa ongazikhetha: ukusakazwa noma ukushisa okuqondile kagesi. Ukusakazwa okuphakathi kukawoyela okushisayo kusho ukuthi uwoyela wokudlulisa ukushisa ushiswa ngokushisa okuthile kwelinye ithangi lokushisa, bese uthuthwa futhi usatshalaliswa ngepompo likawoyela oshisayo. Ukushisa okuqondile ukufaka ishubhu lokushisa kagesi ngqo ebhantsheni ukufudumeza uwoyela wokudlulisa ukushisa kufinyelele kuzinga lokushisa elidingekayo. Umjikelezo wokupholisa usebenzisa amanzi ukuzungeza ngaphakathi nangaphandle kwejakhethi ukuze okokusebenza kungakhiqizi ukuhlangana noma ukunamathela ekushiseni okuthile. Ingashiswa futhi ipholile ngokungeza amakhoyili nezinye izinhlobo ngokuya ngezidingo zomsebenzisi.
(Qaphela: Ngokuvamile, indawo yokushisa noma yokupholisa isetshenziselwa ukwamukela umthetho wepayipi eliphansi lepayipi eliphakeme)
Langaphambilini Kuqondile eyodwa-ungqimba emulsification tank
Olandelayo: 316L cleaner mobile isitoreji ithangi
I-2000L ithangi lokuxuba lensimbi elinamakhanda okusaqanda aphezulu nangaphansi
Kuqondile phezulu naphansi kwe-elliptical ikhanda lokuxuba ithangi ngohlobo loxhakaxhaka lohlaka
I-1000L ithangi lokushisa lokushisa kagesi
Ithangi lokuxuba elenziwe ngo-1000L olulodwa
1000L Insimbi engagqwali kuhlangana ithangi ne Propelle ...
I-Tank Yokuhlanza Inhlanzeko
Ukwehla kodonga okushukumisa ithangi le-emulsification